The Serpent (2021) – Gold Channel Movies
1Season 1 Jan. 01, 2021
Episode 1 Jan. 01, 2021
Episode2Jan. 03, 2021
Episode3Jan. 10, 2021
Episode4Jan. 17, 2021
Episode5Jan. 24, 2021
Episode6Jan. 31, 2021
Episode7Feb. 07, 2021
Episode 8 Feb. 14, 2021
မှုခင်းဇာတ်လမ်းမျိုးကြိုက်သူတွေအတွက် အသစ်ထွက်ရှိထားတဲ့ crime drama မီနီစီးရီးတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ The Serpent ဖြစ်ပြီး အပိုင်း (၈) ပိုင်း ပါ၀င်မှာပါ။ ဇာတ်၀င်ခန်းအတော်များများကို ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ မြို့တော် ဘန်ကောက်မှာ ရိုက်ကူးထားတာပါ။
ရိုးရိုးမှုခင်းဇာတ်လမ်းတွေထက် ပိုစိတ်၀င်စားစရာကောင်းတာကတော့ The Serpent ဟာ ၁၉၇၆ ခုနှစ်က Charles Sobhraj အဖမ်းခံရတာကို အခြေခံရိုက်ကူးထားတာကြောင့် ဖြစ်ရပ်မှန်နဲ့နီးစပ်တဲ့ မှုခင်းဇာတ်လမ်းမျိုးလို့ ဆိုရမှာပါ။
Charles Sobhraj ဟာ ပြင်သစ်လူမျိုး လူလိမ်၊ သူခိုးနဲ့ ကွင်းဆက်လူသတ်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ၁၉၇၀ ၀န်းကျင်က အရှေ့တောင်အာရှတစ်လွှားမှာ အနောက်တိုင်းသားခရီးသွားတွေကို အဓိကပစ်မှတ်ထားပြီး ပြစ်မှု‌တွေကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ကို Splitting killer, the Serpent ဆိုတဲ့နာမည်တွေနဲ့သိကြသလို၊ သူသတ်ခဲ့တဲ့သားကောင်တွေရဲ့‌ သေဆုံးပုံ
အနေအထားအရ သူ့ကို Bikini killer လို့လည်း လူသိများခဲ့ပါတယ်။
ပထမဆုံးအပိုင်းမှာတော့ ၁၉၇၅ ခုနှစ်က ဘန်ကောက်မြို့တော်မှာ ကျောက်မျက်မှောင်ခိုကုန်သည် Charles Sobhraj နေအိမ်မှာ နေထိုင်သွားတဲ့ ဒတ်ခ်ျလူမျိုးလူငယ်စုံတွဲတစ်တွဲရဲ့ ပျောက်ဆုံးမှုနဲ့ သူတို့ကို လိုက်လံရှာဖွေ ထောက်လှမ်းမှုတို့ကို စိတ်၀င်စားစရာ ဇာတ်လမ်းဆင်ပြီး ဇာတ်ကိုအစပျိုးပေးထားပါတယ်။
ကွင်းဆက်လူသတ်မှု၊ မှောင်ခိုမှုနဲ့ ဆေးမှုတွေအပါအ၀င် ဒုစရိုက်သမားတို့ရဲ့ ကျင်လည်ရာနေရာ၊ စရိုက်သဘာ၀နဲ့ သားကောင်ဖြစ်သွားရသူတွေအကြောင်းကို စိတ်၀င်စားစရာရိုက်ကူးထားတာကြောင့် အပိုင်းတိုင်းဟာ စိတ်၀င်စားစရာတွေပါပဲ။ အဲဒါကြောင့် လျို့ဝှက်သည်းဖိုမှုခင်းဇာတ်လမ်းကြိုက်သူတွေအနေနဲ့ ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
Translated & Review by Cherry
TMDb Rating 7.7 50 votes
JodieSeptember 5, 2021Reply
well written article. I will make sure to bookmark it and asmr
LatashiaSeptember 4, 2021Reply
more or figuring out more. Thank you for great information I used to be
My web site; asmr off
JolieSeptember 2, 2021Reply
Also visit my web site; where asmr
JannaSeptember 2, 2021Reply
Havealook at my blog :: was asmr
LurleneSeptember 2, 2021Reply
Today, I went to the beachfront with my scoliosis surgery kids.
EzequielAugust 30, 2021Reply
It’s great to come acrossablog every once inawhile that quest bars
– http://t.co/, isn’t the
The Legend of Dugu (2018) ????????????????